Libi Dress PDF Nlereanya – The Tailoress
Home / Women / Uwe / Libi Dress PDF Nlereanya
A zuru ogologo uwe featuring a tie n'elu na-emeghe azụ na zuru ogologo cowl uwe. Mara mma ma na ala na-eyi mgbe mere si a fechaa ákwà dị ka chiffon ma ọ bụ ndị ọzọ na-akpa ákwà na drapes ọma. Ọnu-ọnu uwe-emepe ka ikpere na a ire ụtọ usoro.
SKU: 605 Categories: Uwe, Women Tags: chiffon, uwe, girl, ogologo uwe, strap dress, n'oge okpomọkụ, ndị inyom
Biko ele ndị LIBI DRESS TUTORIAL Ebe a.
DRESS: Copyshop size: 123cm x 117cm / A4 peeji nke: 30 / US Letter: 30 / A0: 4
LINING: Copyshop size: 92cm x 90cm / A4 peeji nke: 20 / US Letter: 20 / A0: 2